Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSlovenia eziziiNdaba » ISlovenia izimisele ukuba likomkhulu lezokhenketho elitsha laseYurophu
Ukhenketho lokuzonwabisa • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Safety • Iindaba zaseSlovenia eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
ISlovenia izimisele ukuba likomkhulu lezokhenketho elitsha laseYurophu.
Iphulo lamva nje leBhodi yabaKhenkethi yaseSlovenia lenze indawo ekusingwa kuyo yaphila ngokujolisa kukhenketho lohambo, ubuhle bendalo kunye neepaki zelizwe.
I-27% yophando lwabaphenduli bathi baqhele ukubhukisha iiholide zohambo.
'I-Adventure kunye nemidlalo' lolona hlobo lwesihlanu oludumileyo lweholide, kwaye lunencasa ethile kwiindwendwe zemveli zaseSlovenia: amaCzech namaDatshi.
Abakhenkethi abaninzi balangazelela iindawo ezivulekileyo, eziluhlaza emva kweenyanga ekhaya.
Ikhuthazwe liphulo layo lamva nje lokhenketho lehlabathi eligxile kukhenketho, iSlovenia kulindeleke ukuba ibone ukhenketho olungenayo lunyukela kwi-5.7 yezigidi zabantu abafikayo ngo-2024, ukonyuka kwama-22% kumanqanaba angaphambi kobhubhane.
Ngokwabahlalutyi boshishino lokhenketho, 'i-adventure kunye nemidlalo' lolona hlobo lwesihlanu oludumileyo lweholide, kwaye lunolwazelelelo oluthile kwiindwendwe zemveli zaseSlovenia: amaCzech namaDatshi.
Sloveniya likhaya kwezona ndawo zimangalisayo zelizwe laseYurophu kodwa ngokumangalisayo lidlule kubakhenkethi abaninzi. Nangona kunjalo, i Ibhodi yabakhenkethi yaseSloveniaIphulo lakutshanje lenze indawo ekuyiwa kuyo ukuba iphile ngokujolisa kukhenketho lohambo, ubuhle bendalo kunye neepaki zelizwe.
Kuphando lwamva nje lweshishini, i-27% yabaphenduli bathi baqhele ukubhukisha iiholide zohambo. Ukhenketho lwe-Adventure lukwangqineke luxhaphakile kwezinye ze SloveniyaUmthombo weemarike ezingundoqo ezifana neRiphabliki yaseCzech kunye neNetherlands, kunye ne-40% kunye ne-32% yabaphenduli beqaphela olu luhlobo lweholide abalubhukishayo.
Ixesha lephulo lentengiso yaseSlovenia lifanelekile. Abakhenkethi abaninzi balangazelela iindawo ezivulekileyo, eziluhlaza emva kweenyanga ekhaya. Imfuno elindileyo yohambo lwe-adventure iya kubona ukhenketho lwamazwe ngamazwe lubuyela ngokukhawuleza ngakumbi Sloveniya ngaphezu kwezinye iindawo zaseYurophu.